SARIPIKA : Fitsangatsanganan’ny Japoney Eny Ambany Voaroy Mamelana · Global Voices teny Malagasy
SARIPIKA : Fitsangatsanganan'ny Japoney Eny Ambany Voaroy Mamelana
Voadika ny 15 Avrily 2014 8:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, فارسی, русский, srpski, عربي, Italiano, Deutsch, English
Tonga ny fotoam-pamelanan'ny voaroihazo (na voaroy) any Japana. Fomba iray any Japana ahafahan'ny mpinamana, ny mpianakavy sy ireo akaiky azy miaraka sy mankafy ny sakafo sy labiera eny ambanin'ny hatsaran'ny sakura mamelana ny fandinihina ny felam-boninkazo.
‘Ndao hamantatra ny hanami [花見] na ny hetsika fijerena voninkazo amin'ny aterineto, amin'ny alàlan'ireto angon-tsary nampiasàna ny lisansa Creative Commons manaraka ireto:
Ohatry ny mandeha any ambany tonelim-boninkazo ny mandeha any ambany voaroy mamelana. Sary nalain'ny mpampiasa Flickr coniferconifer tamin'ny 5 Aprily 2014. CC BY 2.0
Voaroy mamelana ao amin'ny sahan'i Chidorigafuchi akaikin'ny fiantsonana Kudanshita any Tokyo. Sary avy amin'i Manish Prabhune. Mety ho hita ao amin'ny tranonkala JapanTravel ny tatitra ara-tsary rehetra miaraka amin'ny toro-làlan'ny fitsidihana. Lisansa CC Attribution
Misakafo eo ambanin'ny voaroy mamelana ny olona. Sary nalain'ny mpampiasa Flikr Japanexperterna tany Yawata, Kyoto tamin'ny 1 Aprily 2014 CC BY-SA 2.0
Felana voaroy nianjera tsy nahy ao anaty rano hosotroina. Sary nalain'i Shogo Nozaki tamin'ny 5 Aprily 2014. CC BY-NC 2.0
Mamelatra labasy any amin'ny toeram-pitsangatsanganan'ny mandan'i Akashi (chateau) ny olona. Sary nalain'i Manuel Cansaya Jauregi tamin'ny 3 Aprily 2014. CC BY-SA 2.0
Matory eo ambony labasy ny olona. Mahazatra ny mahita olona miala sasatra eo ambany voaroy mamelana rehefa avy nisotro betsaka. Sary nalain'ny mpampiasa Flickr James Hadfield tamin'ny 3 Aprily 2014.CC BY-NC-SA 2.0
Alika mankasitraka ny fivoahana eny an-tokotany. Fotoana fangalana sary mahafinaritra ny fitondrana ny zanak'alika mitsangatsangana eny amin'ny toeram-pitsangatsanganana rehefa mamelana ny voaroy. Sary nalain'ny mpampiasa Flickr luckyno3 tao amin'ny sahan'ny National Show Memorial tamin'ny 6 Aprily 2014 CC BY-NC 2.0
Rivotra mahery sy oran-dohataona manjera ny felana voaroy. Sary nalain'ny mpampiasa flickr coniferconifer. CC BY 2.0
Làlana rakotra felana voaroy. Sary avy amin'ny mpampiasa flikr y.ganden. CC BY-NC 2.0